Ihe akaebe na Gerald Roethof dị ka ọkàiwu PsyOp na Jos Brech: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ Gbanwee NICKY, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 25 September 2018	• 8 Comments
Tags: ọkàiwu, agba, Gerald roethof, Jos Brech, Nicky Verstappen, na-eme, Ebube, Peter R. de Vries, psyop, ikpe site na mgbasa ozi
25 September 2018 na 14: 57
Ndị ọkàiwu niile na-egosi na mgbasaozi, karịsịa TV, bụ maka ndị na-ezigara obodo na ndị na-ahụ maka ndị ikpe obodo mara aha bụ:
Bram Moskcowicz na dum iodine klas (Wilders, Holleeder wdg)
Benedicte Ficq (Badr Hari / AIVD, ugbu a ụtaba ụtaba)
Richard Korver (gụnyere Hofnarretje)
Sebas Diekstra (na Ivana Smit)
Die De Vries (ikpe a mara ikpe) ugbu a na-enweta ụgwọ ahịa Machia, ebe ọ bụ na '80' afọ ole na ole, na-ekpuchi nhazi netwọk ụmụaka. Demmink (ikpe ikpe ziri ezi na mbụ) bụ onye aka ya dị ọcha dịka petertje si dị, mgbe ahụ ị maara oge ọ bụ ..
Foto ụmụaka na-akpali agụụ mmekọahụ na onye ọrụ kọmputa bụ Joost Tonino, Ikpe Ziri Ezi kpuchiri ikpe na 'uwe mgbokwasị'
Tonino nwere ike iwepu foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na kọmputa, ma ọ na-ewepụ foto ụmụaka na-akpali agụụ mmekọahụ si na Tonino? *
Foto / Nkọwa - Ajụjụ a dị oke njọ, dị njọ, ọ bụ nsogbu (ndụ nkịtị) na-enweghị isi; ndi mmadu, kamakwa n'okpuru iwu iwu, ihe na-adighi nma n'ebe a.
Na mbu n'ihi na ọnụ ọgụgụ nke ihe ụmụaka na-akpali agụụ mmekọahụ ihe onwunwe na-akwado ahịa maka ya na ọtụtụ ụmụaka bụ ndị na-akpata 'azụmahịa' a. Nke a bụkwa ihe a na-atụle oge na oge ọzọ ma ọ bụrụ na iwu (iwu obodo).
Onye a kwadobere OM bụ onye osote onyeisi ndị uweojii na-ahụ maka ọrụ ikpe
A na-egbuchi onye isi osote onye ọka ọrụ Vincent L. ka ọ bụrụ Wednesday n'ihi na a na-enyo enyo na ọ na-akwa iko megide ịkwụ ụgwọ ya na obere.
N'ezie anyị ekwesịghị ịdị oké egwu nke OM ????
25 September 2018 na 15: 13
Ihe nkesa nke DNA a bu nke Bilderberger (2014) Schippers nyere, o doro anya na nke a bu onodu mba uwa. Jikọta mmepe na AI na nke a (CAS / Palantir) na ebe nchekwa data dị otú ahụ nwere ọlaedomine nke nwere ike chee na ị nwere ike idozi. Ọbụna ụlọ ọgwụ agaghị adị mma maka psychopaths ahụ, ụgwọ ahụ adịla njikere. Kedu ihe bụ ụwa dị mma, P:
Onye ụkọchukwu Schippers na-achọ ka ndị uweojii na ndị ikpe mara iji DNA archive nke ụlọ ọgwụ maka nyocha na ikpe dị njọ. Atụmatụ ahụ bụ akụkụ nke usoro iwu iwu iji nyere ndị mmadụ aka ịchịkwa ihe onwunwe ha. Ihe ozo na-emetụta nyocha nke omempụ.
25 September 2018 na 15: 23
Bilderberg nhazi Peter Thiel bụ ihe dị mkpa na nke a burukwa, ọ na-arụsi ọrụ ike na ya: D ..
ANYỊ NA-EZI NDỊ ỌTỤTỤ NDỊ NA-EKWU NDỊ NA-ECHICHE ỤLỌ
Palantir depụtara usoro nlekota oru mgbasa ozi na New Orleans nke ndị otu obodo na-amaghị
Usoro ihe omume ahụ malitere na 2012 dị ka njikọta n'etiti ndị uweojii New Orleans na Palantir Technologies, ụlọ ọrụ ntinye data na-ejikọta ego site n'aka ụlọ ọrụ CIA. Dika ntule na akwukwo Ntughari bu ihe ndi n'elere anya na ndi oru ogha, nke yiri "onodu oku" na Chicago nke n'eme ka ndi mmadu mara ndi ozo ma obu ndi ozo.
Dị ka Thiel si kwuo,
"Echere m na ihe dị egwu bụ na enweghị nkwekọrịta; enweghị atụmatụ, ọ dịghị usoro. Anyị bi n'ụwa nke jupụtara na nkwekọrịta aghụghọ ma na ole na ole nkwekọrịta nke ochie. Ọ bụrụ na ị na-eche ihe ị na-eche, ihe ị chere bụ eziokwu banyere Putin na ndị ndú Chinese, ma nke ahụ bụ maka ya. Ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ ọ dịghị atụmatụ ọ bụla. "
Chọpụta petertje ... ????
25 September 2018 na 16: 37
Achọrọ m ịmata banyere ahịrịokwu a, n'ihi na a na-achọ nkwụsị nke 3 modems na Public Prosecution Service taa. Ọfọn, ọ bụ naanị ebe ihe ndị ị na-ebute ụzọ bụ ụgha ...
25 September 2018 na 19: 54
Roethof a bụkwa onye ọkàiwu maka okwu ikpe ahụ nke ọzọ na nwoke ahụ nwere mmasị nwoke ahụ na ọkpụkpụ ahụ.
26 September 2018 na 07: 38
N'oge na-adịghị onye ọkàiwu mkpa, oge ọ maara ihe ......... ..
Robot onye ọka iwu.
Malite na a maara nke ọma ụgbọ ala, ị maara, site na ndị ọzọ mkpụmkpụ na-ekpuchi ihu.
29 September 2018 na 10: 23
A ghaghị inwe bọtịnụ n'elu ihe dị mma, ihe a bụ shit.
'Ị na-echekwa m'
29 September 2018 na 10: 26
Nwoke dị mma!
" Echiche nkwenye nke hacked
Ihe ọma nke data DNA mba ahụ na mgbakwunye na ịmebi ikpe ikpe ọnwụ »
Nleta ha: 4.181.346